Maqaallada Sabrina Sedicot ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Sabrina Sedicot
Sabrina Sedicot waa suuqgeeye khibrad leh, oo diiradda saaraya dhammaan waxyaabaha dhijitaalka ah. Waxay u shaqeysaa Appnova, hay'ad naqshadaynta hal-abuur leh oo fadhigeedu yahay London iyo Rome. Waxay ka shaqeysaa mashaariicda guud ahaan UX/ UI design, eCommerce, Branding & Content Production. Waxay ku dhiirigelisay dhammaan noocyada sheeko-sheekaynta dhijitaalka ah waxayna xiisaynaysaa abuurista xalal ku habboon oo keeni kara khibradaha lagu dhisayo summada.
Sheekooyinka Shabakadda Google: Hagaha Waxqabadka leh ee Bixinta Waayo-aragnimada Immersive Si Buuxda ah
Jimce, Maarso 25, 2022 Jimce, Maarso 25, 2022 Sabrina Sedicot
Maanta iyo da'da, annagu macaamiishu waxaan rabnaa in aan dheefshiidno nuxurka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah iyo doorbidida dadaal aad u yar. Taasi waa sababta Google u soo bandhigtay nuqul iyaga u gaar ah oo ka kooban qaab gaaban oo loo yaqaan Sheekooyinka Shabakadda Google. Laakiin maxay yihiin sheekooyinka shabakada Google iyo sidee bay wax ugu biiriyaan waayo-aragnimo qoto dheer oo shakhsi ahaaneed? Maxaad u isticmaashaa sheekooyinka shabakada Google iyo sidee ayaad u abuuri kartaa kaaga? Tilmaamahan wax ku oolka ah ayaa kaa caawin doona inaad si fiican u fahamto